XOG RASMI AH:- Muungaab oo xil looga magacaabi rabo xukuumadda federaalka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- Muungaab oo xil looga magacaabi rabo xukuumadda federaalka Soomaaliya
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir islamarkaana ahaa duqii Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) in dhawaantaan loo magacaabi doono xilka wasiiru-dowlaha wasaaradda cadaalada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Ilahaan xogta ah oo aynu ka heleyno saraakiil ka tirsan xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in qorshahaan uu wato madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo uu ku doonaya inuu kaga hortago in Muungaab uu isku soo sharaxo doorashada xilka madaxtinimo ee sanadkaan ka dhici doonto dalka.
Kulan albaabada u xiran oo dhex-maray Xasan Muungaab iyo Xasan Sheekh ayaa la sheegayaa inuu kasoo baxay go’aan ah in Muungaab loo magacaabo wasiiru dowlaha wasaaradda cadaalada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, Xasan Muungaab ayaa si hoose u wata qorshe ah inuu labadaasi xil midkood ka qabto dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo kala ah jegooyinka xildhibaan ama madaxweyne, balse madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku dadaalaya sidii uu arrinkaasi uga hortagi lahaa.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka dharagsan in Xasan Muungaab uu hanti badan ka aruursaday intii uu xilka ka haayay maamulka gobolka Banaadir, taas oo uu madaxweynaha kaga wal-walsan yahay in Muungaab uu ololaha doorashada u isticmaalo.
Dhinaca kale, Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa isaguna rajo ka qaba inuu xilkaan cusub ku dhex wato ololihiisa musharaxnimo ee tan xildhibaanimada iyo madaxweynahaba ah, balse waxaan arrinkaasi ku baraarugsaneen madaxweyne Xasan Sheekh oo mar-dambe ogaan doona.